BWUnion – Page2– Burmese Women's Union
Meanwhile lets just say that we are proud BWUnion contributedawhooping 69 entries.
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခံရသူများအတွက် မလိုချင်သော ကိုယ်ဝန် တားဆီးကာကွယ်ရန်
April 7, 2021 in Infographic /by BWUnion
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခံရသူများအတွက် မလိုချင်သော ကိုယ်ဝန် တားဆီးကာကွယ်ရန်နှင့် လိင်မှတဆင့်ကူးဆက်တတ်သောကာလသားရောဂါများကို ကာကွယ်ရန် အထောက်အကူပြုသည့်အချက်များ
CDMမပိတ်ခင် အမီဝင်လာတဲ့ ရဲမေတစ်ဦး ပြောကြားချက်
April 1, 2021 in News /by BWUnion
မီးဖွားခွင့်ခြောက်လနဲ့ အနားယူနေတဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ရေဦးမြို့နယ်ရဲစခန်းမှ ရဲမေ မဇာဇာငြိမ်းဟာ စစ်အာဏာရှင်အောက်မှာဆက်ပြီး အလုပ်မလုပ်ချင်တာကြောင့် မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ကတည်းက CDM လုပ်ထားကြောင်း RFA ကိုပြောပါတယ်။ ကလေးမွေးထားတာမကြာသေးတာရယ်၊ ခွင့်ခြောက်လယူထားတာရယ်ကြောင့် CDM ဝင်သင့် မဝင်သင့် စဉ်းစားနေရတာဖြစ်ပြီး CDM မပိတ်ခင် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ မတိုင်ခင်မှာပဲ အခုလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ မဇာဇာငြိမ်းကိုယ်တိုင် RFA ကိုပြောပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်အမှတ် လ ၂၆၄၄၃၆ ရဲတပ်သား မဇာဇာငြိမ်းအနေနဲ့ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့ကနေ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့အထိ မီးဖွားခွင့်ရထားပေမယ့် ခွင့်ပြည့်ခဲ့ရင်လည်း စစ်အာဏာရှင်မပြုတ်သေးပါက စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာ အလုပ်မလုပ်လိုတာ၊ ကိုယ်တိုင်ရော မိသားစုရော ရပ်ကွက်၊ မြို့နယ်အတွင်း […]
FEMINISM : Understanding Ourselves
March 31, 2021 in Feminism /by BWUnion
“Feminism is grounded on the belief that women are oppressed or disadvantaged by comparison with men, and that their oppression is in some way illegitimate or unjustified. Under the umbrella of this general characterization there are, however, many interpretations of women and their oppression, so that it isamistake to think of feminism asasingle […]
Introduction Foralong time I have hesitated to writeabook on woman. The subject is irritating, especially to women; and it is not new. Enough ink has been spilled in quarrelling over feminism, and perhaps we should say no more about it. It is still talked about, however, for the voluminous nonsense uttered during the […]
March 29, 2021 in Feminism /by BWUnion
Everywhere I go I proudly tell folks who want to know who I am and what I do that I amawriter,afeminist theorist,acultural critic. I tell them I write about movies and popular culture, analyzing the message in the medium. Most people find this exciting and want to know more. everyone goes to movies, […]
March 29, 2021 in Gender Based Violence /by BWUnion
မိမိတို့လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကျဆုံးရမည်ဟု ယုံကြည်ဆောင်ရွက်နေကြသူများဖြစ်သည့်အလျောက် စံချိန်စံနှုန်း ပြည့်ဝသော အနာဂါတ် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသည့် အရာမှန်သမျှကို ဖော်ထုတ်ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်သွားကြမည်ဟုလည်း အခိုင်အမာခံယူနေပါသဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ပြောင်းလဲတိုးတက်စေချင်သူများအားလုံးအတွက် ဤစာအုပ်ကို ပြုစုထုတ်ဝေလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Annual Activities Report 2019
March 20, 2021 in BWU Report /by BWUnion
Reporting sexual violence in Myanmar
February 1, 2021 in News Briefing /by BWUnion
Reporting sexual violence in Myanmar from 1 February 2021 ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့မှစ၍ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခံရခြင်းဖြစ်ရပ်များအား တိုင်ကြားခြင်း နိုင်ရန် လမ်းညွှန် This document contains in English and Burmese. It is for anyone who has experienced sexual violence by armed actors, de facto authorities, members of the police force, military, or other defence services personnel or those associated with them […]
Burma Army persecution of civilians continues in Kawng Kha, six years after the rape-murder of two Kachin teachers
January 19, 2021 in Other Documents /by BWUnion
ကချင်ကျောင်းဆရာမနှစ်ဦး မုဒိမ်းကျင့်၊ သတ်ဖြတ်ခံရပြီး ခြောက်နှစ်ကြာခဲ့သော်လည်း အရပ်သားပြည်သူများအပေါ် ဗမာ့တပ်မတော်မှ ဆက်လက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေမှု မူဆယ်ခရိုင်၊ ကောင်းခါးကျေးရွာ၌ ကချင်ကျောင်းဆရာမနှစ်ဦး မုဒိမ်းကျင့်၊ သတ်ဖြတ်ခံရသည့် (၆)နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့၌ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းရှိ အရပ်သားပြည်သူများအပေါ် ဗမာ့တပ်မတော်ဘက်မှ ဆက်လက် အဓမ္မပြု၊ ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်နေမှုများအား အဆုံးသတ်ပေးရန်နှင့် တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ပေးရန် ကချင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး-ထိုင်းနိုင်ငံ (KWAT) က ထပ်လောင်းတောင်းဆိုလိုက်သည်။ kwat.office@gmail.com www.kachinwomen.com Burma Army persecution of civilians continues in Kawng Kha, six years after the rape-murder of two Kachin teachers On the six-year anniversary of the […]
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ကျား/မ အခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုများနှင့် တိုင်းရင်းသား ပဋိပက္ခများက လိင်အုပ်စု တစ်စုစီကို ကွဲပြားစွာသက်ရောက်ပုံ
August 23, 2019 in Other Documents /by BWUnion
“ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်ခံရပေမယ့် တော်လှန်ရေးကြီးက အားလျော့မသွားဘူး” October 18, 2021
“စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ တော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေသူတွေကို နည်းပေါင်းစုံနဲ့ သိက္ခာချဖို့ကြိုးစားမှာဖြစ်ပြီး အခုတော်လှန်ရေးမှာ အမျိုးသမီးတွေပါဝင်မှုကအားကောင်းတဲ့အတွက် မျိုးဆက်သစ် အမျိုးသမီးတွေပါဝင်လာမှုကို အဟန့်အတားဖြစ်အောင်၊ မိသားစုဝင်တွေကိုအရှက်ရအောင်၊ နောက်ထပ်အမျိုးသမီးငယ်တွေ ဆက်ပြီးမပါလာနိုင်အောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ် ဆောင်တာဖြစ်တယ်”
“ခရောင်းလမ်းပေါ် ရဲရဲလျှောက်လှမ်းနေကြတဲ့ ဆူးပန်းလေးများ” October 15, 2021
“လုပ်တာကတော့ တစ်နေကုန်ပဲ။ ထမင်းစားရင်တောင်မှ အချိန်ကြာလို့မရဘူး။ သူတို့က ထမင်းစားချိန်၊ ရေချိုးချိန်တွေမှာ သေနတ်ဖောက်ခဲ့ရင် ထမီရင်လျားနဲ့ ပြေးရတဲ့ မစ်ရှင်ပုံစံမျိုးတွေလည်း လုပ်ရတော့ နားချိန်ဆိုတာမရှိပါဘူး”
“ပြေးစရာ မြေမရှိ” အစီရင်ခံစာမှ ဖော်ပြနေသော မြေပြင်ရှိအကျပ်အတည်းများ October 14, 2021
" တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ နွေဦးတော်လှန်ရေးမတိုင်ခင် ၁၀ စုနှစ်ပေါင်းများစွာတည်းက ကြုံလာရတဲ့ကိစ္စတွေဟာ နွေဦးတော်လှန်ရေးဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ပိုပြီးပြန်ဖြစ်လာတယ်။ မြေပြင်မှာ ပြည်သူတွေကြုံနေရတာက တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ဘယ်တုန်းကမှလျော့သွားတာမရှိပါဘူး။ အခုကတော့ ပိုဆိုးလာတယ်။ "
“ဒူးမထောက်လက်မမြှောက် LGBT များရှေ့ဆက်လျှောက်” October 13, 2021
“LGBTIQ တွေဆိုတာလည်း ရွံစရာသတ္တဝါတွေ၊ အနှိမ်ခံလူတန်းစားတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ပြောင်းလဲ ပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ LGBTIQ တွေကိုလည်း လက်ခံနားလည်ပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့် ရင်းနဲ့ ဘယ်လောက်ပဲအခက်အခဲတွေရှိရှိ ဘယ်လောက်ပဲပင်ပန်းမှုတွေကြုံကြုံ စစ်အာဏာရှင်ကျဆုံးတဲ့အထိ လမ်း ပေါ်မှာရှိမယ်။ တော်လှန်ရေးအောင်ဖို့အတွက် ကိုယ်ရောစိတ်ရောပါဝင်သွားမယ်”
“သေကံကလွှတ်လာပေမယ့် ရှင်သန်ဖို့ခက်ခဲနေပြန်တယ်” October 11, 2021
“ကျွန်မတို့ အချုပ်ကလွတ်လာတော့ ဖမ်းဆီးမခံရခင်အချိန်က ခိုလှုံနေထိုင်ခဲ့တဲ့ မဟာကံကြီးရှင် တိုက်ပွဲ ရှောင်စခန်းကို ပြန်လည်နေထိုင်ဖို့ရောက်သွားပါတယ်။ အဲဒီတိုက်ပွဲရှောင် စခန်းထဲမှာ ကျွန်မတို့ မာလာကျေးရွာ သားတွေ နေထိုင်ကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် စခန်းတာဝန်ခံက ကျွန်မတို့ကို စခန်းမှာနေထိုင်ဖို့ လက်မခံတော့ပါဘူး”